बुधबार शेयर बजारमा सामान्य करेक्सन, नेप्से परिसूचक २ हजार ६७१.६१ विन्दुमा झरेर बन्द | News Polar
बुधबार शेयर बजारमा सामान्य करेक्सन, नेप्से परिसूचक २ हजार ६७१.६१ विन्दुमा झरेर बन्द
काठमाडौं । बुधबार नेप्से परिसूचक ०.११ प्रतिशतले घटेर २.८५ अंकमा झरेको छ । आजको दिन शेयर बजारमा सामान्य करेक्सन देखिएको हो। यता सेन्सेटिभ इन्डेक्स भने ०.६२ अंक बढेर ४७६.८० विन्दुमा पुगेको छ ।
यस दिन २ हजार ६७१.६१ विन्दुमा झरेर बन्द भएको बजारमा रू. ७ अर्ब २६ करोड ६९ लाख ७२ हजार बराबरको १ करोड ६५ लाख ९३ हजार ५०१ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ ।
बुधबार होटल्स तथा पर्यटन समूहका लगानीकर्ताले सर्वाधिक कमाएका छन् भने व्यापारिक समूहका लगानीकर्ताहरुले सर्वाधिक गुमाएका छन् । होटल्स तथा पर्यटन समूहको परिसूचक सर्वाधिक ६.०२ प्रतिशतले बढेको हो भने व्यापारिक समूहको परिसूचक सर्वाधिक ३.९४ प्रतिशतले घटेको हो ।
यो दिन व्यापारिक समूहसँगै जलविद्युत् समूहको १.२४ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा समूहको १.४५ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको १.४ प्रतिशत, अन्यको ०.८९ प्रतिशत, जीवन बीमाको ०.६२ प्रतिशत र लगानी समूहको १.६६ प्रतिशत परिसूचक घटेको छ ।
होटल्स तथा पर्यटन समूहको परिसूचक सर्वाधिक बढ्दा लघुवित्तको २.१६ प्रतिशत, विकास बैंकको १.५ प्रतिशत, बैंकिङको ०.२९ प्रतिशत, वित्तको ०.०८ प्रतिशत र म्युचुअल फण्डको ०.३३ प्रतिशत परिसूचक बढेको छ । सामान्य करेक्सन भएको बुधबारको बजारमा पाँच ओटा कम्पनीको शेयरमूल्य ९ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ ।
महिला लघुवित्तको सर्वाधिक ९.९९ प्रतिशत, चन्द्रागिरी हिल्सको ९.९८ प्रतिशत, एनआईसी एशिया लघुवित्तको ९.९८ प्रतिशत, रिलायन्स फाइनान्सको ९.८४ प्रतिशत र यूनिभर्सल पावरको ९.७० प्रतिशत मूल्य वृद्धि भएको हो ।
यसदिन महिला लघुवित्तको प्रतिकित्ता रू. ८४ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ९२५, चन्द्रागिरी हिल्सको प्रतिकित्ता रू. २३४ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. २ हजार ५७८, एनआईसी एशिया लघुवित्तको प्रतिकित्ता रू. ११६ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. १ हजार २७८, रिलायन्स फाइनान्सको प्रतिकित्ता रू. २५ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. २७९ र यूनिभर्सल पावरको प्रतिकित्ता रू. १६ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. १८१ कायम भएको छ ।
यसदिन रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेडको शेयरमूल्य भने सर्वाधिक ७.२६ प्रतिशतले घटेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ३० ले घटेर कम्पनीको अन्तिम शेयरमूल्य रू. ३८३ कायम भएको हो ।
यस दिन सबैभन्दा बढी नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको शेयर कारोबार भएको छ । यस बैंकको रू. २७ करोड ६३ लाख २५ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । सर्वाधिक रकमको कारोबार भएको दिन कम्पनीको शेयरमूल्य भने २.३१ प्रतिशत घटेको छ । प्रतिकित्ता रू. १३ ले घटेर कम्पनीको अन्तिम मूल्य रू. ५९२ कायम भएको हो । यो दिन नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंककाको शेयरमूल्य न्यूनतम रू. ५९१ देखि अधिकतम रू. ६१२ सम्म पुगेको थियो ।
प्रकाशित : चैत्र २५, २०७७, १६:१०:१३
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आठ महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक
सोमबार नेप्से परिसूचक १७.२० अंकले उकालो लाग्यो, ७ अर्ब बढीको शेयर कारोबार